Shina: Manivana ireo mpanohana ny Kolontsaina Mena sy Bo Xilai · Global Voices teny Malagasy
Shina: Manivana ireo mpanohana ny Kolontsaina Mena sy Bo Xilai
Voadika ny 19 Marsa 2019 3:45 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Marsa 2012)
Hatramin'ny nivoahan'ny ny vaovao nandroahana ilay mpitarika teo aloha tao amin'ny ny Antoko Komonista Shinoa tao Chongqing antsoina hoe Bo Xilai, nanjary lasibatry ny sivana ireo mpomba an'i Bo sy ireo tranonkala mpanohana azy.
Nitaraina tao amin'ny Sina Weibo, ny 50 center kolontsaina mena na mpaneho hevitra an-tserasera, Sima Nan izay manohana ny fanivanana antserasera an'ireo fanehoan-kevitra “tsaho”, sy manakiana ny governemanta fa noterena hamafa ny maromaro tamin'ireo lahatsorany izy:
Hatry ny halina, lahatsoratra am-polony no voafafa. Fantatro fa tsy maintsy “mandinika” aho, fantatro fa tsy nanao ambanin-javatra ny “sary manontolo” ireo namana izay nanaisotra ny lahatsoratro ary tsy mora ny fanapahan-kevitr'izy ireo. Amin'ny maha-mpikambana tranainy tao amin'ny antoko nandritra ny 30 taona mahery, dia nanaja ny antoko foana aho. Ankehitriny, tsy afaka milaza izay inoako fa marina aho. Voatery mangina aho. Mahatsiaro tena maharary aho. Tena goavana tsy tahaka ny rahalahy jiobao izay notafihan'ny tsaho izany fanaintainana izany.
Ankoatra izany, tsy maintsy nanafoana [zh] ny kabariny ampahibemaso izy:
Nofoanana ny lahateniko ampahibemaso tao amin'ny Oniversite Aerônaotika sy Astrônaotika ao Beijing. Azonao ny antony. Noho izany antony izany ihany, dia hofoanana ny lahateniko ao amin'ny Oniversite momba ny varotra ao Beijing afaka andro vitsy. Hiato ny fandaharana lahatsary antserasera 60 minitra momba ny fandalinana fampahalalam-baovao, noho ny fahatsapako ratsy ara-politika. Veloma.
Nesorina tao anaty aterineto ireo tranonkala Ankavia maromaro izay mampiroborobo ny eritreritra Maoista. Nametraka filazana ny tranonkala Utopia:
Eo am-pikojakojana ny lohamilinay ka tsy azo idirana. Miala tsiny amin'ny fanelingelenana aterak'izany.
Tsy azo nidirana ihany koa ireo tranonkala hafa izay mampiroborobo ny Maoista na Kolotsaina Mena, tahaka ny Maoflag.net sy redchinacn.com.
Misy dikany roa ny fanakatonana ireo tranonkala etsy ambony. 1. Mba hanakanana ireo mpanohana an'i Bo Xilai tsy hanao famoriam-bahoaka ao Chongqing. 2. Fihetsika hanoherana ny sivana amin'ny votoaty miaro an'i Bo Xilai sy ny maodely Chongqing. Raha ny marina dia nanomboka nampiasa ny QQ sy Weibo ireo mpanohana an'i Bo mba hanetsika fanoherana ao Chongqing amin'ny faran'ny herinandro ho avy, etsy ambany ny pikantsary misy ny hafatra:
Hoy ny voalazany:
“Olom-pirenena an-tapitrisany no manohana ny sekretera ao Chongqing, Bo Xilai. Ora: @ 10 ora maraina amin'ny Asabotsy sy Alahady. Toerana: toerana malaza tahaka ny “tsangambaton'ny fahafahana”, tokotanin'ny komitin'ny tanàna sy governemantan'ny tanàna.
Mpamadika izay te-hampiroborobo ny rafitra fananana fahantrana manokana.
Fahavalom-bahoaka izay manohitra ny hevitra Maoista.
Afaka mijoro hanohitra amin'izany hery izany ny olona.
Misaotra. Apariaho azafady.
Mandritra izany, nasehoan'ny tranonkala nasionalista any ampitan-dranomasina “Exposing the Western Slave” tamin'ny pejy voalohany ny lahatsoratra taloha mitsikera ireo foibe ofisialy miisa 50 izay tsy miraharaha afa-tsy ny asany ara-politika fotsiny fa tsy manaja ny finoany ara-politika.